ကလိုစေးထူး: အဖိုးအခနဲ့ တန်ဘိုး
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:25 PM
Apr 25, 2010, 10:56:00 PM
thanks for the new post,,
but personally khaw tau buuuu :(
Apr 26, 2010, 12:04:00 AM
Very Very Delicious!!!!!
Glad to read your thoughts again.
Apr 26, 2010, 2:28:00 AM
၃၆၀ နဲ့တင်ရပ်နေတော့ အိမ်ပဲ ပြောင်းသွားပြီလား၊ ကျမပဲ အသစ်မချိတ်မိတာလား ထင်ထားတာ။ လတ်စသတ်တော့ အိမ်မပြောင်းဘဲ အိပ်ပျော်နေပုံရတယ်။ မေ့လောက်နေမှ တပုဒ်ဆိုပေမယ့် တပုဒ်ဆို ဆိုသလောက်ပါပဲ။
Apr 26, 2010, 3:26:00 AM
အစ်ကို ပျောက်လှကြီလားလို့ တွေးနေတာ စာအုပ်တွေပါဆယ် သွားထုတ်နေတာကိုး =) ပြန်ပေါ်လာတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဘာစာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်တိုင်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။
`အဖိုးအခ များတိုင်းလဲ တန်ဘိုးကြီးသွားတာတော့ မဟုတ်ဘူးကွ` မှတ်သားသွားတယ် .။
Apr 26, 2010, 8:16:00 AM
စာပြန်ရေးတာ တွေ့ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
လုံးဝ မရေးတော့ဘူး ထင်ထားတာ။
အမြဲလို မဟုတ်ရင်တောင် အချိန်ရရင် ရေးပါ။
မဖတ်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ ပိုစ့်တွေ မျော်နေပါတယ်။
စာမရေးတာ ကြာပေမယ့် ရေးလက် မကျသေးဘူးနော်။
Apr 26, 2010, 8:25:00 AM
ဝေ့ .. ဘယ်တွေဝေ့နေလဲ ဝေ့ ။ ပြန်ပေါ်လာတာကောင်းတယ်ဝေ့။ အရင်လို ပုံမှန်ပြန်ရေးဦးဝေ့ ။
Apr 26, 2010, 9:07:00 AM
ကလို.... ၀ဲလ်ကမ်းဘက်.... :)
Apr 26, 2010, 9:37:00 AM
သက်မဲ့လေးကို အသက်သွင်းရေးထားတာလေး နှစ်သက်မိတယ်..
ကြော်ငြာသိပ်များတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေတော့ စိတ်မဝင်စားမိတာ အမှန်ပဲ..
ဘလော့ပေါ်က စာတွေကလည်း အဖိုးအခ မပေးရပေမယ့် တန်ဘိုးရှိတာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်နော်... ဥပမာ ဒီအပြာရောင် စာအုပ်လေးလိုပေါ့..
စာတွေ အများကြီး ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ..
အနားလည်း တော်တော်ရလို့ အမောလည်း ပြေသွားပြီထင်တယ်...
(ကျနော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကိုစေးထူးရဲ့ စာသားလေးပါ)
Apr 26, 2010, 9:53:00 PM
ပြန်ပေါ်လာသေးတယ် အကိုရေ မျှော်နေတာ ကြာပါပြီကော... တကယ့်ကို အဖိုးအခမှန်းလို့မရပေမဲ့ စာကောင်းပေကောင်းတွေ အများကြီး ပေးတဲ့ အကိုဆိုဒ်လေးကို လာလည်ဖြစ်ဆဲပါ
Apr 26, 2010, 10:56:00 PM
အသစ်ပြန်တင်တာ တွေ့လို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုကလိုစေးထူး ရေးတဲ့ပို့စ်တွေ အားလုံးကို ကြိုက်တယ်။ ပို့စ်ပုံမှန် ပြန်တင်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Apr 27, 2010, 3:52:00 AM
Apr 28, 2010, 6:57:00 PM
Apr 28, 2010, 10:50:00 PM
တင်ပြပုံလေး ကောင်းတယ်ဗျို့ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ..ဆက်ရေးပါ...
Apr 29, 2010, 12:26:00 AM
မေ့သလောက်နေတော့ ထုံးစံအတိုင်းအရေမရ အဖတ်မရ ဝေဖန်ရေးလိုလို လေကန်ရေးလိုလို ၊ ပညာပေးလိုလို သညာပေးလိုလို ကပေါက်တိကပေါက်ချာစာတွေ နဲ့ပြန်ပေါ်လာတာပါပဲလားကွာ။ မင်းအရင်က အတိုင်းပဲ ...ဟဟ
Apr 30, 2010, 11:40:00 PM
Ii'm happy to read your writing again.
May 1, 2010, 7:08:00 AM
ကောင်းတယ် ။ အဖိုးအခနဲ့တန်ဖိုး ဆိုတာ တူမှမတူဘဲလေ နော့
May 8, 2010, 8:32:00 AM
စာအုပ်လေးတွေနေရာကနေ ပီပီပြင်ပြင်ရေးထားပုံလေးကောင်းတယ်...။ ပြီးတော့ စာအုပ်ရဲ့ အဖိုးအခနဲ့ တန်ဖိုးကို နှိုင်းယဉ်ပြသွားပုံကောင်းတယ်...နောက်ထပ်လဲ များများရေးပါ...။
May 13, 2010, 4:45:00 AM
May 13, 2010, 10:20:00 AM
မတွေ့တာကြာလို့ ..........။ :)
May 23, 2010, 3:36:00 AM
လာလာအော် ချင်တာ စီပုံးမတွေ့ လို့ ။
နေထိုင်ကောင်းရဲ့လား။ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေ လွန်းတယ် အစ်ကိုရယ်။
Sep 24, 2010, 1:49:00 AM
အသံမဲ့ လူငယ် said...
ကောင်းလိုက်တာ .. ရှဲချင်လို့ လင့်ယူသွာူးပါတယ်နော့ ..
Nov 6, 2010, 10:44:00 AM
စာတအုပ်ရဲ့ တန်ဘိုး နဲ့
စာတပုဒ်ရဲ့့တန်ဘိုးတွေကို နားလည်သွားတယ် ကိုစေးထူး ရေ ..
ကိုယ်တိုင်က စာတအုပ်အနေနဲ့ ခံစားသရုပ်ဖေါ်ထားတာလေးကို လည်း သဘောကျတယ် ..
Feb 25, 2011, 8:52:00 PM
ကွာလတွတ်တွေရဲ့ အနှစ်မပါ အခွံတောင်ပါရုံပါတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ကိုယ်တွေ့ခံထားရတဲ့သူမို့ ဒီစာကို နှစ်နှစ်ကာကာ ကြိုက်မိပါတယ်... စာမရေးတာ ကြာတာကိုလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိတယ်။
Apr 5, 2011, 12:42:00 AM